जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालको मेसुमा डा.यादब नियुक्त #DrPramod yadav • Health News Nepal
डा. प्रमोद यादव
जनकपुर , १९ मंसिर २०७७
जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा बरिष्ठ सल्य चिकित्सक डा. प्रमोद यादव नियुक्त भएका छन।
यस अघि मेसुको कार्यभार सम्हालेका‌डा नागेन्द्र यादवलाई बिदाई गरिएको छ।
सेवा निवृत्त भई डा.नागेन्द्र यादवको बिदाइ पछि शुक्रबार डा.प्रमोद यादवले एक औपचारिक कार्यक्रमका साथ कार्यभार सम्हालेका छन्।
यस अघि पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको पालामा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको निर्देशकमा पनि नियुक्ति भएका थिए।
Tags: #government of Nepal#Health and population ministry#Janakpur hospitalCorona Virus #Covid19Dr.pramod YadavMedical Superintendent